एन्जलस होम स्कुलको उदाहरणीय कार्य ! « Bagmati Page
एन्जलस होम स्कुलको उदाहरणीय कार्य !
काठमाडौं । काठमाडौंको एन्जल होम्स प्रि स्कुलले कोभिडका कारण समस्यामा परेका आफ्ना विद्यार्थी, अभिभावक तथा नागरीकहरुका लागि निःशुल्क रुपमा दुईवटा भ्यान उपलब्ध गराएको छ ।
जेष्ठ २ गतेबाट नै सेवा बूढानीलकण्ठ वडा नं. ३ नयाँचोक तथा नगरपालिका भरनै यातायाताको सुविधा विद्यालयले प्रदान गरिरहेका छ । अत्यावश्यक र एर्मजेन्सी सेवाका लागि विद्यालयले विरामीको बसोबास भएको स्थान सम्म पनि सेवा उपलब्ध गराईरहेको छ ।
मनु श्रेष्ठ र कुमार खड्की दुईजना सवारी चालकले आफ्नो व्यक्तिगत जिवन समेत नभनी संक्रमित तथा पिडामा परेका नागरीकहरुको उद्धारमा जुटिरहेका छन् । विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपल समेत रहेका युवा समाजसेवी जनक थापाले कोभिडका कारण हरेक नागरीकहरु जोखिमयुक्त रहने अवस्था छ । यो अवस्थामा विद्यालयले आफ्नो समाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नु कर्तव्य हो । उनले भने, हामी सकेको सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहन्छौ । हामीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका मात्रै नभई अत्यावश्यक परेको खण्डमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा पनि आफ्नो सेवा दिईरहेका छौ ।
समाजिक एकता अनि सद्भाव र शुख-दुःखमा हातेमालो गर्न सकेको खण्डमा हामी धेरै समस्यालाई सहजै पार लगाउन सक्ने प्रिन्सिपल थापाले बताए । आपत विपदका समयमा यो सेवा लिन चाहानेहरुले अ‍ैंचो पैंचो अभियान तथा सिधा विद्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्ने समेत थापाले बताएका छन् ।